သက်ကြီးရွယ်အိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု - Page6of6- Hello Sayarwon
အသက် ၆၀ နဲ့ ၆၀ အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးကို မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးကပဲဖြစ်ဖြစ် အခကြေးငွေနဲ့ငှားရမ်းထားတဲ့ သူတစ်ဦးကပဲဖြစ်ဖြစ် မညှာမတာဆက်ဆံမိတဲ့အခါ သက်ကြီးရွယ်အိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတစ်ရပ်ဖြစ် ပေါ်လာရပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ရိုက်နှက်တာ၊ ထိုးကြိတ်တာနဲ့ အပူလောင်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို မအိပ်ချင်ဘဲ အိပ်ရာထဲ လှဲနေခိုင်းတာ၊ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်မှာ မထိုင်ချင်လည်း ထိုင်နေရတာနဲ့ အခန်းထဲမှာ သူတို့မနေချင်တာကို အခန်းတံခါးပိတ်ပြီး ထားတာကလည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရညှင်းပန်း နှိပ်စက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သည်လိုမျိုး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုးကို သက်ကြီးရွယ်အိုရဲ့ခန္ဓါကိုယ်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေကနေတဆင့်သိရှိနိုင်ပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို အဝတ်မပါဘဲ နေခိုင်းတာ၊ လိင်အသားပေးပုံတွေရိုက်ခိုင်းတာ၊ မလျော်ကန်တဲ့ အထိအတွေ့မျိုးတွေလိုမျိုး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရတဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ကြုံခံစားရတတ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အခါ တွေ့ရတတ်တဲ့လက္ခဏာရပ်တွေ-
• အဝတ်အစားတွေနဲ့ အတွင်းဝတ်အဝတ်တွေမှာ သွေးတွေပေနေတာ။
• လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ။
• လိင်အင်္ဂါအနီးတဝိုက်နဲ့ ခန္ဓါကိုယ်မှာ ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာတွေရှိနေတာ
• လိင်အင်္ဂါ ဒါမှမဟုတ် စအိုဝကနေသွေးထွက် နေတာ။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာ ခြိမ်းခြောက်ခံရတာ၊ လျစ်လျူရှုခံရတာ၊ အော်ငေါက်ခံရတာနဲ့ အလွန်အမင်းထိန်းချုပ်ခံရတာမျိုးတွေ တွေ့ကြုံခံစားရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိပ်စက်ခံရတာလိုမျိုး ဒဏ်ရာအနာတရတွေမတွေ့ရပါဘူး။ အိပ်စက်မှုပုံစံ မူမမှန်တာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရပ်တွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးတာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်တာတွေ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
၄။ ငွေရေးကြေးရေးအရ အလွဲသုံးစားလုပ်မှု
သက်ကြီးရွယ်အို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ငွေကြေးတွေကို မတရားခြိမ်းခြောက်ရယူတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှိပ်စက်သူက သက်ကြီးရွယ်အိုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲ သူရဲ့အကြွေးဝယ်ကတ်ကိုယူသုံးတာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရောင်းချဖို့ ဆန္ဒမပါဘဲ အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးပြီး လက်မှတ်ထိုးရောင်းချခိုင်းတာမျိုး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငွေရေး ကြေးရေးအရ အမြတ်ထုတ်နေတယ်ဆိုတာကို နှိပ်စက်သူကငွေတွေကို ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ဘဏ်ကနေ ခဏခဏထုတ်တာမျိုး၊ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေကို တရားဝင်အထောက်အထားတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲတာမျိုးတွေနဲ့ အခြားအမျိုးမျိုး သော အရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုကို လုံလောက်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုမပေးတာ။ လုံလောက်တဲ့ အစားအစာပမာဏ၊ ဆေးဝါးတွေမပေးတာ သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ပေးတာ၊ လျစ်လျူရှုခံရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာ နံစော်နေတဲ့ အိပ်ရာတွေနဲ့နေနေရပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းလာတဲ့အပြင် အိပ်ရာထဲမှာပဲ အမြဲနေရတာကြောင့် ကျောပူနာလိုမျိုး ဝေဒနာတွေခံစားလာရပါတယ်။
အထက်ပါအချက်လိုမျိုး အနေအထားတွေ သတိထားရမယ့်အချက်တွေ ကိုယ့်မိသားစုဝင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင် တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန် အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးနှိပ်စက်ခံရသူနဲ့ စကားပြောနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ သူတို့ရဲ့ သဘောဆန္ဒကို သိရှိနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။ အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့ အနေအထားမျိုးဆိုရင်တော့ ဥပဒေရဲ့အကူအညီ ကိုရယူဖို့ တုံ့ဆိုင်းမနေဘဲချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ ချက်ချင်းကြီးဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာကို ပို့ဆောင်ပေးပါ။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ မကာကွယ်နိုင်တာကြောင့် အကူအညီရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကြောက်လန့်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့ ဖုန်းတစ်ချက်လောက်ဆက်ပေးဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
1. Elder Abuse: Know the Signs. http://www.webmd.com/healthy-aging/elder- abuse-signs
Assessed September 25, 2016.
2. Elder Abuse: Definitions. http://www.cdc.gov/violenceprevention/elderabuse/definitions.html